လမ်းဆုံ .....: Webpage
ReadMoe “သတင်းနှင့် အထွေထွေ”
ကို ၀င်ကြည့်လိုက်နော် ကျေးဇူး
http://www.winkabarkyaw.co.cc/ ကျေးဇူး kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
http://www.sawlinux.net ကျေးဇူး kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
http://mrmargalibrary.blogspot.com ကျေးဇူး kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
ReadMoe “ကိုမာဃ ၏ ဓမ္မစာအုပ်စင်”
kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
http://www.myordbok.com/ ကျေးဇူး kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
Mobile Guide Journal စတဲ့ ဂျာနယ်တွေကို အပတ်စဉ် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
နေမင်းမောင် ဆိုဒ်က တွေ့လို့ ကူးတင်လိုက်တယ် http://funny.pho.to
ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိဿ ရဲ့ အတွေး အရေးတွေကို အားပေးရအောင်
လိုက်ကြဦးဆို့နော် .. ကျေးဇူး kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
၀င်ကြည့်လိုက်ဦး .. ကြိုက်တယ်ဆို ဒေါင်းပေရော့ ကျေးဇူး kaung.kz@gmail.com အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ.. အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပေးပါ။
ဧရာအဖွဲ့ကနေ လုပ်ထားတဲ့ Dictionary website နဲ့ dictionary software လေးကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်. လတ်တလောတော့ စာလုံးပေါင်း 241299 ကို ထည့်သွင်းပေးထား ပါတယ်. နောက်ထပ်လည်းပဲ update လုပ်နေဦးမယ်ထင်ပါတယ်. web dictionary မှာကတော့ မြန်မာ မှ အင်္ဂလိပ် ၊ အင်္ဂလိပ် မှ မြန်မာ ၊ မြန်မာ မှ မြန်မာ ၊ မြန်မာဆိုရိုးစကား ၊ မြန်မာ ဘန်းစကား ၊ ကွန်ပျူတာသုံးအတိုကောက်အက္ခရာများ ၊ အမည်အသံထွက်များ ၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ စတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်. လိုချင်တဲ့ စာသားတော်တော်များများကို တွေ့ရပါတယ်.
Ayar Group's ရဲ့ ဆိုဒ်ကိုလည်း သွားရောက်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုခုတော့ ထူးပါလိမ့်မယ်
ဧရာအဖွဲ့ရဲ့ မျှဝေခြင်းကို ရယူမယ်ဆိုရင်တော့
http://add.ayar.co/ ဒီနေရာကိုလည်း သွားလိုက်ဦးနော် ..
ReadMoe “Ayar Dictionary”
ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်
ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ဦးနော် ...
ReadMoe “Myanmar Fitness”
ကျန်းမာရေး နှင့် အလှအပဆိုင်ရာ
ကျန်းမာရေး နှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ ... အလှကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ ..
http://www.myanmarskylink.com ကို ၀င်ကြည့်လိုက်ကြဦးနော် ..
ReadMoe “ကျန်းမာရေး နှင့် အလှအပဆိုင်ရာ”
select onChange="document.location.href=/junctionwebpage.blogspot.com/search/label/this.options[this.selectedIndex].value;" style="width: 280px;">